(XOGTA QARSOON). Xassan Daahir Aweys iyo Axmed Madoobe oo qaatay kulan xasaasi ah. – idalenews.com
(XOGTA QARSOON). Xassan Daahir Aweys iyo Axmed Madoobe oo qaatay kulan xasaasi ah.
Wararka ka imanaya Villa Somalia ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulan qarsoodi ahi dhex maray Horjoogaha maamulka Juba Sheekh Axmed Madoobe iyo Xasan Daahir Aweys oo labadooduba muddo dheer ka wada tirsanaa ururkii Xisbul Islaam ee burburay. Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) iyo Xasan Daahir Aways ayaa la sheegay in kulankoodu uu ahaa mid qarsoodiya oo aan saxaafada loo soo bandhigin, isla markaana uu ka dhacay Guriga uu haatan maxbuuska ku yahay Xasan Daahir Aways oo ah kii uu deganaa Maxamed Siyaad Barre ee loo yaqaanay Habar Khadiija oo u dhawaa Baarkii caanka ahaa ee Baar Fiyaat.
Kulankan ayaa lagu soo waramayaa mid ay labada nin oo mar ahaan jiray saaxiib aad isugu isugu dhow in lagu kala war qaatay, waxanu Xasan Daahir Aways uga waramay xaalkiisa iyo Rajada lagu xidhay sii dayntiisa.
Sheekh Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Juba ayaa Xasan Daahir u sheegay In Itaalkiisa uu la hadli doono Xukuumada iyo Madaxwaynaha Somalia.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Hogaamiyaha Maaamulka KMG ah ee Jubba ayaa Qayla dhaan dheer kula dhex dhacay saxiibadisii ay ka wada tirsanayeen xisbiyada Islaamiga ee ka jira Muqdisho , kaas oo ka hadlay xadhiga dowlada Soomaaliya ay kula dhaqantay Sheekh Xasan Daahir Aweys, oo dhawaan naftiisa kala soo baxsaday Al-Shabaab, haatana u xidhan dowlada Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa isagu cod dheer ku sheegay in aaanay muuqan wado dowlada Soomaaliya ay xabsiga ugu sii haysan karto Xasan Daahir oo uu sheegay inaanu garanayn waxa uu iminka ku xidhan yahay, waxaana uu lagama maarmaan ku tilmaamay in xoriyadiisa la soo celiyo.
Wuxuu Culimada Soomaliyeed ka dalbaday in dowlada Soomaaliya ay kala hadlaan sidii Xasan dib uu ugu heli lahaa xoriyadiisa, maadaama sida uu sheegay Shabaab uu ka soo baxsaday isagoo shacab ahna uu ku sugan yahay Muqdisho.
Hadalkan wuxuu ka jeediyay kulan looga hadlayo xagjirnimada oo galay Maalintiisii Seddexaad kana soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Somaaliya.
Kulankii shirka ayaa shalay waxa lahaa oo gaar isku arkayey Culimada Soomaaliyeed gaar ahaan Culimada Ictisaam waxaana uu Sheekh Axmed Madoobe ka dalbaday inay u midoobaan siidaynta wadaadka Xasan daahir Aways, isla markaana dawlada culays lagu saaro sii dayntiisa ayuu ka codsaday Axmed madoobe.
Dowlada Soomaaliya ayaa u ogaalaay Axmed Madoobe oo Marti ku ah Muqdisho, isla markaana degan guriga uu xabsi guriga ku yahay Xasan Daahir ee Habar Qadiijo inuu kulan la qaato kaas oo sida la sheegay qaatay muda Saacado ahna ay wada hadlayeen Sheekh Xasan iyo Axmed Madoobe oo mar ka wada tirsanaa Xisbul Islaam.
Axmed Madoobe oo la filaayo inuu kulaabto Kismaayo iyo Madaxweyne Xassan oo Kismaayo kuwajahan. (Warbixin)
Madaxweynaha Soomaaliya oo qaabilay wafdi ka socday dalka China (SAWIRO)